ရထားစီးရတာအရမ်းကြိုက်လာ?? လာပါပြီ ရထားလမ်းအောက်က ဟိုတယ်!!!! - JAPO Japanese News
လာ 27 Jan 2020, 16:48 ညနေ
တိုကျိုမှာကျင်းပမယ့် အိုလံပစ်ကို နိုင်ငံအသီးသီးကလည်း လာအားပေးကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက တည်းဖို့ ဟိုတယ်မလုံလောက်တာပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ရထားလမ်းအောက်မှာ ဟိုတယ်ဆောက်လိုက်ရင်ရော?? ဆိုပြီးစဥ်းစားလာကြပါတယ်။ ခတ်တာက ရထားလမ်းအောက်မှာရော ခိုင်ခံ့ပါ့မလား အဆင်ပြေပါ့မလား?? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကလည်း ရှိလာပြန်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ကျင်းပမယ့် တိုကျိုမြို့ရဲ့ အိုလံပစ်ကတော့ ဘယ်လောက်မှမလိုတော့ဘူးနော်
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဟိုတယ်မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာကိုတော့ တော်တော်လေး အလေးအနက်ထားပြီး ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
အိုလံပစ်ကြောင့် နိုင်ငံလည်း ၀င်ငွေတွေအများကြီးတက်လာမယ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း အစွန်းအမြတ်တွေ အများကြီးကျန်မယ့်အတွက် ဟိုတယ်တွေဆောက်ရင် မကောင်းဘူးလာလို့ စဥ်းစားပေမဲ့လည်း လုံခြုံစိတ်ချရမယ့်နေရာ၊ အဆောက်အအုံမဆောက်ရသေးတဲ့ လွတ်နေတဲ့ နေရာဆိုတာက မရှိသလောက်ကို ဖြစ်နေပြီ။
အဲ့တာနဲ့ပဲ တိုကျိုမှာ ဟိုတယ်ဆောက်လို့ရမယ့် လွတ်နေတဲ့နေရာရှာရင်းနဲ့ ….
တွေ့ပါပြီး …. ရထားလမ်းအောက်ပါ!!!!
တိုကျိုမြို့ရဲ့ ရထားလမ်းဟာ ကားတွေ၊ လူတွေအတွက် အတားအဆီးမဖြစ်အောင် တော်တော်လေးကို ပေမြင့်မြင့်နဲ့ ဆောက်ထားတာပါ။ ဒါဆိုအဲ့ဒီရထားလမ်းရဲ့အောက်မှာ သေချာတာကတော့ နေရာလွတ်နေပါပြီ။
အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ဟိုတယ်ဆောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဟိုတယ်နာမည်ကိုလည်း UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA (ရထားလမ်းအောက်က AKIHABARA ဟိုတယ်) လို့ပေးထားတယ်။
အရင်ဒီတိုကျိုမြို့က ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ နည်းပညာသုံး wireless အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေလောက်ပဲရှိခဲ့ပြီး၊ အခုတော့ လျှပ်စစ်သုံးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွေ၊ ဂိမ်းတွေ၊ Animation တွေနဲ့ စျေး၀ယ်လို့ရတဲ့ကုန်တိုက်တွေ စတဲ့ ရေပန်းစားတဲ့ မြို့ဖြစ်လာပေါ့။
ကဲ ဂျပန်ရဲ့ Animation ကိုကြိုက်သူတွေ အဲ့ဒီမြို့ကို မသွားချင်တဲ့ လူရှိလား? အဲ့ဒီနေရာကို electric town လို့လည်းခေါ်ပါသေးတယ်။
ဒီမြို့လေးက အချက်အချာကျပြီးတော့၊ ရထားလမ်းတွေကလည်း ဒီမြို့လေးမှာ တော်တော်ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လုပ်ကြတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ၁ ရက်ကို ရထားစီးသူတွေ ၇ သိန်းလောက်ရှိပါတယ်။
ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ခရီးသည်တွေပြေးလွားနေတဲ့ ဘူးတာရုံကြီးပေါ့…
တိုကျိုဆိုတာ စည်ကားပြီး အဆင်ပြေပေမဲ့၊ လွတ်နေတဲ့ မြေကွက်ဆိုတာ ရှာလို့တောင် လုံး၀မတွေ့နိုင်တော့ဘူး။
အဲ့လိုအဆောက်အဦးတွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်နေတဲ့ မြို့မှာမှ ဖြစ်ချင်တော့ ရထားလမ်းကုန်းကျော်တံတားရဲ့ အောက်ကို အင်ဂျင်နီယာတွေက မျက်စိကျသွားတာပေါ့။
ရထားလမ်းအောက်က နေရာလွတ်တယ်သာပြောတာပါ ဘယ်သူမှတော့ အဲ့လိုနေရာမှာတည်းချင်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လား? ဆူညံလွန်းလို့ စိတ်ညစ်မှာပဲ!!!
ဒါပေမဲ့ ဒီဟိုတယ်ဆောက်ထားတဲ့ idea က “ရထားလမ်းအောက်မှာ အိပ်ပျော်စေရမယ်” တဲ့..
ကဲ့.. ဘာတွေလဲ စိတ်၀င်စားလာပြီးနော်!!
အဲ့ဟိုတယ်ကိုလည်း ဆောက်ပြီးပြီလား ဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်
ဒါကတော့ ဟိုတယ်ရဲ့ အရှေ့မျက်နှာစာပါ။
ပြောင်လက်နေတာပဲနော်။ ကော်ဖီဆိုင်ပါ ထားထားပေးတယ်။
အောက်ကပုံလေးကတော့ သော့ယူပြီး ကိုယ့်အခန်းကိုယ်သွားဖို့ စင်္ကြံလေးပါ
အပေါ်ကပုံမှာ ကုန်းကျော်တံတားရဲ့ အောက်ကတိုင်ကြီးတွေကိုတွေ့တယ်မလား? ဟိုတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါ အဲ့ဒီတိုင်တွေကို တမင်သက်သက်မဖျောက်ဘဲ ဒီအတိုင်းထားတာပါတဲ့.။
ဆေးတွေသုတ် ပြန်မွမ်းမံပြီးတော့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့တောင် ဖန်တီးထားတာ။
အဲ့ဒီလိုသာဆိုရင် ဟိုတယ်မှာတည်းရတဲ့ခံစားမှုရော၊ ကိုယ်ဟာ တံတားအောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာရော ရသနှစ်ခုတောင် ရတာပေါ့နော်..
အမလေး အင်ဂျင်နီယာတို့ရဲ့အစွမ်း အံ့မခန်းပါပဲဗျာ….(ရယ်လျက်)
ဒီအခန်းက လူ ၆ ယောက်တည်းခိုလို့ရပါတယ်။ ၁ ခန်းအတွက် ၁ ညကို ယန်း ၂၄ သောင်းပါ။
လူက ၆ ယောက်ဆံ့တဲ့အတွက် စုပြီးပေးရင် တော်တော်လေးကို စျေးသက်သာတယ်လို့ ပြောရမယ်။
ကြုံရင် ၀င်တည်းလာခဲ့ကြနော် ခ်ခ်..
အုတ်တွေစီထားတဲ့ နံရံနဲ့ အစိမ်းရောင်အရွက်တွေကို ဒီဇိုင်းဆင်ထားတာကလည်း လုံး၀ကို အခန်းထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမဟုတ်ဘဲ၊ လွတ်လပ်တဲ့ ခံစားမှုအသစ်တစ်ခုကိုပေးတယ်ပေါ့။
လှေကားပါ တွဲပါတဲ့ ၂ ထပ်ကုတင်တွေရှိတဲ့ အခန်းကတော့ အများဆုံး လူ ၇ ယောက်အထိတည်းခိုနိုင်ပါတယ်။
နည်းနည်းလေးတော့ နေရတာ ကျဥ်းမယ်။ ဒါပေမဲ့ အခန်းတိုင်းမှာ ရေးချိုးခန်းတစ်ခန်းစီ ပါပြီးသားပါ။
ဟုတ်ပါပြီ။ တည်းခိုရတာအဆင်တော့ပြေပြီးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန် ဆူညံနေမှာပေါ့!! ဆိုပြီးမေးချင်တဲ့သူလည်း ရှိမယ်မလား?
တတ်နိုင်သလောက် အသံလုံအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီဆူညံသံတွေကိုမကြားရအောင် ဟိုတယ်ကိုလည်း တံတားနဲ့လွတ်အောင် တတ်နိုင်သမျှ နိမ့်ပြီးဆောက်ထားတယ်ပေါ့။ လုံး၀အသံလုံတယ်လို့ တော့ အာမ မခံပေမဲ့၊ အဆင်လုံး၀မပြေတဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက် နားကြပ်ကိုပါ ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်တဲ့။
ကဲ,, service ကတော့ ရှယ်ပဲနော်…
ဒီဟိုတယ်ရဲ့ အဓိက target ကတော့ ဂျပန်အိုလံပစ်ကိုလာကြမယ့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်တွေအတွက်ပါ။
ဒီရထားလမ်းအောက်ဟိုတယ်သာ အောင်မြင်ပြီးနာမည်ကြီးသွားရင်၊ တိုကျိုမြို့ရဲ့ တခြားနေရာတွေမှာလည်း လိုက်ဆောက်လာကြတော့မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခုအထိကတော့ အိုလံပစ်ကမရောက်လာသေးပေမဲ့၊ ခရီးသွားတွေများလာတဲ့ ဂျပန်မြို့ပြကြီးမှာတော့ ဟိုတယ်တွေများလာတာကလည်း ကောင်းတဲ့အချက်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။
ဒီလိုနေထိုင်စာရိတ်တွေက အပြိုင်အဆိုင် များနေတဲ့နိုင်ငံမှာ လုံခြုံပြီးစျေးသက်သက်သာသာနဲ့နေရရင်တော့ မဆိုးဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့နော်……
ရှုခင်းအရမ်းလှတဲ့ဟိုတယ်ရဲ့ ဇိမ်ခံညစာ ？
သန့်စင်ခန်းထဲက အနုပညာ !!!